Akụkọ - T-shirts bụ ugbu a ụdị ejiji
T-uwe elu bụ ihe ejiji ejiji ugbu a. Ha bụ ndị nkịtị, dị mfe ma dịkwa ọnụ ala. Ndi mmadu choro ha. Ya mere, ole ụdị T-shirts dị na ahịa, na mgbe ndị enyi na-ezukọ ma rie nri, stains na-atanye na uwe. Esi ọcha ha?
1. Tụgharịa uwe elu ahụ tupu ịsaa ya, ka usoro ihe ndị mara mma ghara imebi n'oge ịsa.
2. Were aka were nwayọ, jiri nwayọ,
3. Ejila uwe elu kpuchie uwe elu ozugbo, tụgharịa ya n'ime ka ọ kọọ. Nke a nwere ike igbochi uwe ahụ ka ọ ghara imebi, uwe ndị ahụ ga-achakwa odo ma sie ike
4. A ga-etinye T-shirt gbara ọchịchịrị na mmiri nnu maka awa 1 ~ 2 mgbe a na-asacha ya na nke mbụ, nke nwere ike igbochi uwe ahụ ịchacha
5. Debe ụdị uwe T-shirt mgbe ị na-ehicha, yabụ na ịkwesighi ịgba ya ọkụ.
6. Ejila uwe ndị ọzọ gbara ọchịchịrị sachaa T-shirts, ka ị ghara ime ka uwe ahụ daa, gbapụ agba,
7. Adịla elu okpomọkụ, na mmiri mmiri nke akwa T-shirt owu ekwesịghị ịgafe ogo 30, ka ị ghara imezi agadi na ịda akwụkwọ. Atụmatụ maka ịsacha oge egwuregwu egwuregwu Chiefs 1. Ezigbo alkali na okpomọkụ na-eguzogide.
Kedu otu esi ehicha T-shirts?
Ekike T-uwe na-agbanwe agbanwe ekwesịghị ịkpụcha ya na nnukwu okpomọkụ iji gbochie mmebi nke nrụgide nke akwa; emegharịla, nke ga-emebi ekwedo nke akwa; ụfọdụ T-shirts na-agbanwe agbanwe na-eji yarn yarn, nke yarn ahụ na-acha ọcha, na akwa akwa ahụ na-adịwanye mma. Kpachara anya ka ị ghara imebiga ya ókè mgbe ị na-asa Ọ dị arọ iji gbochie oke ịfụfụ; na-agbanwe T-shirts enweghị ike ikpughere anyanwụ iji gbochie mmebi nke ịdị na-agbanwe akwa ahụ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, mgbe ị na-asa T-shirts, gbalịa ka ị ghara ịsacha igwe, n'ihi na nke a ga-emetụta mbipụta na akwa akwa. Na mgbakwunye, ọ kachasị mma iji kpoo ha n'akụkụ azụ iji gbochie usoro e biri ebi ka ọ ghara ịpụ.